တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ. လါအီကူး ၁၂ သီယ ၂၀၁၉ | Radio Veritas Asia
တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ. လါအီကူး ၁၂ သီယ ၂၀၁၉
တႈကြႈထံဆိကမိႈ မးသဲ ၁၇း၂၂”၂၇ လါအီကူး ၁၂ သီ ၂၀၁၉
ဒ္သိးပသုတကဲထီဥ အတႈလီၚဃံၚအလီႈတဂ့ၚဒီး’’’’’’’’’’ ဟ့ဥလီၚလ႕ပွၚတဖဥနဥ့ လ႕ဎဂီႈယ ဒီးလ႕နဂီႈတက့ႈ’ (မးသဲ ၁၇း၂၇)
ဟီဥခိဥအစီၚပၚတဖဥ ဟံးနဥ့တႈအသြဲ လ႕အဖိဒဥ၀ဲ မ့တမ့ႈ လ႕ပွၚဂၚလဲဥ (Cf Mt 17:26). ခရံဏစံး၀ဲလ႕ ဖိသ့ဥတဖဥအခီပညီ အကစႈဒဥ၀ဲဒီးအပ်ဲဥအဘီဥသ့ဥတဖဥ ႀက႕းလ႕အဘဥတႈပ်ဲပူၚအီၚလ႕ တႈဟ့ဥတႈခိတႈသြဲနဥ့လီၚ’ တႈလုႈဟံဥ မ့ႈ၀ဲပႈကစႈဎြၚအဟံဥယ ခရံဏမ့ႈ၀ဲပႈကစႈဎြၚအဖိခြါယ ဒီးအပ်ဲဥအဘီဥသ့ဥတဖဥမ့ႈ အဒီပုႈ၀ဲႈသ့ဥတဖဥ ဒ္အမ့ႈပႈတဂၚဃီအဖိသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ႀက႕းလ႕အဘဥတႈပ်ဲပူၚအီၚလ႕ အကဘဥဟ့ဥ၀ဲတႈအသြဲသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’
ဘဥဆဥ တႈပဏပူၚအသး ဘဥဃးဒီးတႈဟ့ဥတႈအသြဲ ကကဲထီဥဘဥဖုးတႈဒိတဂ့ၚတဲႈတဘဥယ တႈနဥပ႕ႈကမဥတႈနဥ့လီၚ’ စီၚပ့းတရူး ဘဥတႈမ႕အီၚလ႕ခရံဏကစႈ ဒ္သိးအကလဲၚဖီဥနဥ့ညဥ ဒီးကထံဥနဥ့တိႈ လ႕အကသ့ဟ့ဥ၀ဲတႈအသြဲလ႕ ခရံဏကစႈဒီးအပ်ဲဥအဘီဥသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’ အအံၚမ့ႈ၀ဲလ႕ တႈကြႈထြဲမၚဂ့ၚထီဥက့ၚ တႈလုႈဟံဥအဂီႈနဥ့လီၚ’
တႈကဲထီဥတႈလီၚဃံၚအလီႈ တမ့ႈထဲလ႕ တႈကတိၚအ႕ကတိၚသီ တႈဆိဥတႈထုပွၚအဂၚဘဥဒီး မ့ႈစ့ႈကီးဒိတဂ့ၚတဲႈတဘဥ လ႕ပွၚအဂၚသ့ဥတဖဥ ထံဥဘဥ၀ဲဒီးအတႈလဲၚက်ဲကမဥသ့၀ဲနဥ့လီၚ’ ခရံဏအနီႈကစႈဒဥ၀ဲ တပ်ဲအသးလ့ၚတက့ၚ ဒ္သိးတႈဒိတဂ့ၚတဲႈတဘဥ ကအိဥဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕အအိဥယ လ႕ပွၚအဂၚကထံဥ၀ဲဒီးကလဲၚကမဥက်ဲအဂီႈဘဥနဥ့လီၚ’
ပကဘဥသ့ဥညါနဥပ႕ႈ၀ဲလ႕ ပဒိဥပပွႈလ႕အခိးကြႈပ႕ဆွ႕ပွၚသ့ဥတဖဥ လိဏဘဥ၀ဲပတႈဆီဥထြဲမၚစ႕ၚအ၀ဲသ့ဥ လ႕တႈတ့ဘွီထီဥထံကီႈ ဒီးထံဖိကီႈဖိဒီး ကရ႕ကရိအတႈလိဏဘဥတႈသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ဘဥဆဥ ကဘဥမ့ႈ၀ဲလ႕ တႈလူၚပိဏထြဲဒိကနဥသကိးတႈသိဥတႈသီ လ႕အအိဥသူဥလီၚအသးလ႕ တႈတီတႈလိၚအဖီခိဥနဥ့လီၚ’ တႈဒိကနဥထံကီႈအတႈသိဥတႈသီ မ့ႈ၀ဲတႈခြဲးတႈဎဏတမံၚ မ့ႈစ့ႈကီးမူဒါတမံၚနဥ့လီၚ’
တႈကြႈထံဆိကမိႈ မးသဲ ၁၈း၁၂”၁၄ ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၀ သီ ၂၀၁၉
တႈကြႈထံဆိကမိႈ လံဏလုၚကဥ ၁း၂၆”၃၈ ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၉ သီ ၂၀၁၉
တႈကြႈထံဆိကမိႈ မးသဲ ၉း၃၅”၁၀း၁ယ၆”၈ ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၇ သီ ၂၀၁၉
တႈကြႈထံဆိကမိႈ မးသဲ ၉း၂၇”၃၁ ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၆ သီ ၂၀၁၉